Fosil na-enye smartwatches ọhụrụ ọhụụ abụọ maka ụmụ nwanyị na-ege ntị | Akụkọ akụrụngwa
Fosil na-enye smartwatches ọhụrụ ọhụrụ maka ụmụ nwanyị na-ege ntị
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ụmụ nwoke nwere ike ịnwe ọfụma na teknụzụ ọhụụ karịa ụmụ nwanyị, ọ bụghị ụmụ nwanyị niile bụ otu. Enwere ike ịchọta ihe atụ doro anya na smartwatches, ụdị nke emepụtara n'oge na-adịbeghị anya nke anyị hụrụ mgbe ọ bụla ebido nnukwu smart smart, smart smart nke na-adabaghị nke ọma na nkwojiaka nwanyị.
Ọ bụrụ na anyị chọọ ahịa maka smartwatches echere maka ọha na eze, ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, naanị Apple Watch nwere ụdị 38-millimita nwere ike ịbụ nhọrọ. Onweghi ndị nrụpụta ọzọ na-enye smartwatches nke yiri ma ọ bụ obere akụkụ. Ruo ugbu a. Fossil onye na-eme ihe nkiri ka webatara smartwat ọhụrụ abụọ maka ụmụ nwanyị: Q Neely na Q Jacqueline.
Fdị Fosil ọhụrụ ahụ na-enye anyị ihe nkedo nke 36-millimita ma dozie ya maka ụmụ nwanyị. N'ime anyị na-ahụ ngwakọ ngwakọ ngwakọ ngwakọ, nke nwere ihu analog nke ọdịnala nke ndụ niile mana yana ọrụ nwere ọgụgụ isi n'ime. Site na ụdị ọhụụ abụọ a, Fosil na-agbasawanye, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, katalọgụ nke ngwaọrụ amamịghe na-anwa iru ndị na-ege ntị nke anaghị eji ngwa ngwa ịnabata teknụzụ ọhụrụ.
N'agbanyeghị obere ya, ma Q Neely na Q Jaqueline ha anaghị belata ọrụ ha ma ha na-enye anyị otu njirimara dịka ụdị ngwakọ na ụlọ ọrụ ahụ na-enye n'ahịa, na ọkwa site na ịma jijiji, nlekota nke arụ ọrụ ahụ, njikwa egwu egwu site na ama anyị na igwefoto, nyocha ụra ... Fosil Q Neely na Fosil Q Jaqueline ga-ada ahịa ahụ na October 22 na ga-eme ya na ọnụahịa nke $ 155 na $ 175 n'otu n'otu. Hydị ngwakọ ndị a dakọtara na smartphones jikwaa ụdị nke ma ọ bụ karịa karịa Android 5.0 na iOS 9.0 ma ọ bụ karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Fosil na-enye smartwatches ọhụrụ ọhụrụ maka ụmụ nwanyị na-ege ntị
Samsung na-enye Bixby 2.0, ọgbọ nke abụọ nke onye inyeaka gbadoro ụkwụ na ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi
Gran Turismo Sport maka PS4 ugbu a